तानातानमा परेका थिए अजय देवगन, दुई अभिनेत्री बीच भएको थियो ‘भुत्लाभुत्ली’ ! – Ramailo Sandesh
एजेन्सी – भारतीय अभिनेता अजय देवगन अहिले बलिउडका सफल कलाकार मध्येमा पर्छन्। अजयले काम गरेका पछिल्ला धेरै जस्ता चलचित्रहरु सफल छन्। अजयले एक्सन, कमेडी देखि थ्रिलर चलचित्र सम्ममा आफ्नो अभिनय कला देखाइसकेका छन्।
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ यिनै सफल अभिनेता अजय देवगन कुनै बेला दुई अभिनेत्रीको तानातानमा परेका थिए। उनका कारण दुई अभिनेत्री बीच ‘लफडा’ नै भएको थियो। भारतीय संचार माध्यमहरुका अनुसार उनीहरु बीच भुत्लाभुत्ली नै भएको थियो।
को हुन् उनीहरु ?
अजय देवगनलाई लिएर सम्बन्ध नै बिग्रिएका नायिकाहरु रवीना टन्डन र करिश्मा कपूर हुन्। बताइएअनुसार, कुनै एक समयमा अजय देवगन र रवीना प्रेम सम्बन्धमा थिए। उक्त सम्बन्धलाई लिएर रवीना गम्भीर थिइन्। त्यतिकैमा अजयको जीवनमा करिश्मा कपूरको इन्ट्री भएको थियो। चलचित्र ‘जिगर’मा काम गरेपछि अजय र करिश्मा नजिक भएका थिए।
अजयको जीवनमा करिश्माको प्रवेशसँगै उनले रवीनसँगको सम्बन्ध तोडे। यसरी सम्बन्ध तोडिएपछि करिश्मा र रवीन बीचको सम्बन्ध बिग्रियो। उनीहरु बीचको मनमुटाव यो हद सम्म पुग्यो कि उनीहरु ‘भुत्लाभुत्ली’ मै उत्रिएका थिए। चलचित्र ‘आतिश: फायर फील द फायर’ को छायाँकनका क्रममा दुई बीच भुत्लाभुत्ली नै भएको थियो।
रविना र करिश्माको झगडा यहीं समाप्त भएन। यी दुई एक अर्काको अनुहार हेर्न पनि चाहँदैनथे। मनमुटाबकै बीच रवीन र करिश्मा ‘अंदाज अपना अपना’ चलचित्रमा सँगै देखा परेका थिए। तर, चलचित्र शुटिंगका क्रममा एक अर्कासँग कुरासमेत गरेनन्।
सँगै तस्विर खिच्न अस्विकार
एकपटक बलिउड अभिनेता शाहरुख खानले होलीको अवसरमा पार्टी आयोजना गरेका थिए। त्यसक्रममा रवीनले करिश्मासँग तस्विर खिच्न अस्विकार गरेकी थिइन्। चलचित्रमा सँगै काम गर्ने, तर तस्विर नखिच्ने रवीनले बताएकी थिइन्।
अजय र करिश्मा बीचको सम्बन्ध पनि धेरै समय टिकेन। अजयको जीवनमा काजोलको प्रवेश भएसँगै अजय र करिश्मा बीचको सम्बन्ध टुटेको थियो।